:: My Little World ::: ♣ The Phone I Like Most
Posted by Nay Nay Naing at 2/12/2009 06:01:00 PM
နက်စုတ်လို့ ဘာပုံမှ မမြင်ရပါသဖြင့် စာကိုသာ ဖတ်ပြီး
မှန်းကြည့်သွားပါကြောင်း..၊ မနက်အစောကြီးမှ လာကြည့်မယ်..။
Thursday, February 12, 2009 6:24:00 PM
အင်း။ အတူတူပဲ။ ဘာမှ မမြင်ရဘူး။ ဒီလထဲ All Touch Nokia စင်ကာပူမှာ ဖြန့်မယ် ပြောတယ်။ I-Phone လိုက ပုံစံကလေးပဲ။ မိုက်တယ်။ ဟိုတစ်လောက နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာတော့ သူကိုင်လာတာ မြင်လိုက်တယ်။
Sin Dar Lar နဲ့ZT >> ကျွန်မ လည်း အိမ်ကနေ မမြင်ရဘူး။ အခု့ဒီပိုစ့်က ပုံတွေ တခြားနေရာပြောင်း ညွန်းလိုက်တော့ မြင်သွားပြီ။
အရင် ပိုစ့်တွေက ပုံတွေ မမြင်ရဘူး။ တခြား ဘလော့တွေမှာ Blogspot (Blogger) မှာ တိုက်ရိုက်တင်တဲ့ ပုံတွေ လည်း မမြင်ရဘူး။ အလုပ်မှာတုန်းက မြင်ရတယ်။ အခု ဖုန်းနဲ့ကြည့်တာ၊ တခြား Internet Serivce Provider ပြောင်းသုံးကြည့်တာ မြင်ရတယ်။ တခြားနိုင်ငံက လူတွေလည်း မြင်ရတယ် ပြောတယ်။ Google (Blogspot) ကသာ ဖြစ်မယ်ဆို လူတိုင်း မမြင်ရသင့်ဘူး။
ဒီတော့ စင်္ကာပူက StarHub Line က ဖြစ်တာလို့ယူဆလို့ ရတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်သုံး (Home User) တွေပဲ ဖြစ်တာလို့ ထင်တယ်။ (User အားလုံး ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး)။ Business Plan တွေ မဖြစ်တာ သေချာတယ်။ အလုပ်မှာလည်း Starhub ဒါပေမယ့် Business Plan ၊ Blogspot က ပုံတွေ မြင်ရတယ်။
Thursday, February 12, 2009 8:31:00 PM
ဟုတ်တယ်နေနေရေ StarHub ကလိုင်းတွေ အားကျလာတဲ့ အနေအထားမှာရှိတယ်။ ကျွန်တော့် အိမ်မှာလဲ လိုင်းကဆိုနှေးပြီး ဝါယာလက် နဲ့သုံးရင် ပိုတောင်မြန်နေသေးတယ်။
Thursday, February 12, 2009 9:58:00 PM
ပုံတွေ မြင်ရပါ ပြီ...
ညီမလေးတွေကို ဝယ်ပေးမယ့် ဖုန်းတော့
မြင်ရပါပြီ။ အစက အဲဒီဖုန်း ဝယ်မလို့ပဲ။ E71 ကို သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ အိုဘားမား အားကျတာနဲ့ Blackberry ပဲ ဝယ်ဖြစ်သွားတယ်။ :P
ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်ရှေ့အိမ်က သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖုန်းဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီး
နို့ဆီခွက်ကို ကြိုးနဲ့ ဆက်ပြီးဆော့ဖူးတယ်။ တော်တော် အသာံကည်ပါတယ်။
Friday, February 13, 2009 12:34:00 AM
Friend of mine is using this Phone. It is quite good.
BlackBerry ၀ယ်လိုက်တယ်.. ဒါဆို ZT က သထိန်းပဲ.. :P
mm စမ်းသလို တစ်ခါမှ မစမ်းဖူးသေးဘူး။ နောက်တစ်ခါ ရန်ကုန်ပြန်မှာ စမ်းကြည့်အုံးမယ်။ အိမ်မှာ နို့ ဆီခွက်တွေ ရှိလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကိုဖြိုး သူငယ်ချင်းသုံးနေတယ်ဆိုတာ အောက်က ပုံထဲက N99 တော့ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်. ..
Monday, February 16, 2009 8:44:00 AM